Ciidamada xooga dalka oo la wareegay deegaano hor leh oo ka tirsan Gobolka Hiiraan – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Dowladda Federalka Somalia iyo kuwa Amisom, ayaa lasoo sheegayaa inay la wareegeen deegaano ka tirsan Galbeedka Gobolka Hiiraan oo ay ka saareen Ururka Al Shabaab.
Gudoomiye ku xigeenka dhanka ammaanka iyo siyaasada Maxamed Ibraahin C/laahi ayaa u sheegay Saxaafadda in ciidamada ay gaareen deegaano Shabaab ay ku sugnaan jireen, iminkana ay si buuxda ula wareegeen.
Waxa uu sheegay deeganada ay ciidamada qabsadeen inay ka mid tahay deegaanka Ceel-cali oo ka tirsan Gobolka Hiiraan, horay waxaa ugu sugnaan jiray ciidamada Ururka Al Shabaab.
Ciidamada Dowlada iyo kuwa Amisom ayaa wada guluf colaadeed oo ka dhan ah Ururka Al Shabaab, iyaga oo la wareegay deegaano iyo Degmooyin ka tirsan Gobolada dalka.
Al Shabaab ayaa lumiyay dhul badan oo ay maamulayeen oo awood ahaan gacantooda laga maroojiyay hada.
Qaramada Midoobe oo eedeysay Shirkada Soma Oil & Gas